Hel Free Photo Raadka Software iyo Abuur la yaabka leh soo duubey
> Resource > Talooyin > Hel Software Best Photo Raadka iyo Abuur la yaabka leh soo duubey
Photoshop mudan tahay lahaanshaha haddii aad ku daray in ka badan saamaynta sawir fudud oo keliya. Laakiin inta badan oo naga mid ah, waxaa jira PhotoFiltre, saamaynta sawir free software ugu fiican.
Eeg sidoo kale: Free Online Photo Raadka
Best Photo Raadka Software
Halkan waa shaashada ee PhotoFiltre. Sida aad arki karin, waxa ay leedahay a Photoshop style interface laakiin waxay kuu sahlaysaa in aad dalbato saamaynta sawirka si aad images. PhotoFiltre ka badan tahay wax ku ool ah ka badan oo ay ku jiraan qalab Photoshop by waxtar leh sida Converter Dufcaddii, icon dhoofisaa, sahamisa image, iwm
Photo Saamaynta Muqaal Software u Mac
Haddaba, haddii aad rabto in aad slideshow la saamaynta wanaagsan-raadinta sawir, aan loo baahnayn in la helo kale software saamaynta sawir. Waxaad had iyo jeer ka bedel yaabaa sawiro aad la dhisay-in sawir miirayaasha. Qaadashada Fantashow u Mac tusaale ahaan, ku timaadda in ka badan 15 saamaynta sawir si kor loogu qaado sawiro aad ka mid click, oo ay ka mid madow iyo caddaan, Sepia, xun, Kartuunka, Vignette, Hot Wave, iyo wixii la mid ah.
Intaas waxaa sii dheer, qaabka qurux badan bixisey si dhab ah ku darto saamaynta badan si ay sawiro aad ku slideshow, kuwan oo kale ah:
Photo Saamaynta Muqaal Software for Windows
DVD Muqaal dhise waa Windows version u dhiganta Fantashow, kaas oo sidoo kale ku jira saamaynta sawirka guud ee photos slideshow. Maxaa ay tahay in Xusuuso waa in uu leeyahay Hababka badan Fantashow si ay u abuuraan filimada la saamaynta sawir horyalka Talyaaniga.